1. The combined pill
ဆေးနှစ်မျိုးတွဲ စားဆေးများ Com- bined Oral Contraceptive (COC) pill လို့လည်း
ခေါ်တယ်။ Estrogen (အီစထိုဂျင်) နဲ့ Progestogen (ပရိုဂျက်စတိုဂျင်) ဟော်မုန်းနှစ်မျိုး ပူးတွဲပါတယ်။
မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ လတိုင်းထွက်ရမဲ့ မ – မျိုးဥ ထွက်မလာအောင်တားဆီးပေးတယ်။ သားအိမ်အဝရှိတဲ့ ချွဲရည်ကို ထူပြစ်စေတာမို့ မ – မျိုးဥ ထွက်စေဦးတော့ ကျား-သုက်ပိုးနဲ့ တွေ့ဖို့ ခက်ခဲစေပြီး၊ သားအိမ်အတွင်း နံရံကို ပါးစေတာကြောင့်လည်း သန္ဓေဟာ သားအိမ်မှာ လာမကပ်နိုင်ဘူး။ စနစ်တကျသုံးရင် ၉၉% စိတ်ချရတယ်။ လစဉ်ရာသီ စတင်လာတဲ့နေ့ကစ ဆေးသုံးရမယ်။ တစ်ကတ်မှာ ၂၈ လုံးပါတယ်။ ၂၁ လုံးက အရောင်တစ်မျိုး၊ ခုနစ်လုံးက အရောင်တစ်မျိုး။ ၂၁ ရက်ကြာ နေ့တိုင်းတစ်ပြား သောက်ပါ။ နောက်ဆုံး သောက်ရမယ့် အရောင်မတူတဲ့ ဆေးပြား ခုနစ်ပြားဟာ အားဆေးသာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ၇ ရက်အတွင်း သွေးပြန်ဆင်းမယ်။ သွေးဆင်းတာ နည်းမယ်။ ရက်လည်း တိုမယ်။ သွေးဆင်းရက် မှန်မယ်။ ရာသီမလာခင်ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ နည်းတယ်။ ဝက်ခြံ၊ အလုံး-အကျိတ်၊ ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဖို့မဟုတ်တာအတွက်လည်းသုံးနိုင်တယ်။
2. The contraceptive injections
ပဋိသန္ခေတား ထိုးဆေးတွေ Progestogen ဟော်မုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ ထိုးဆေးဖြစ်တယ်။ Depo-Provera 150mg သုံးလခံ၊ Noristerat နှစ်လခံ၊ တစ်လခံ၊ အမျိုးအစားတွေရှိတယ်။ သုံးလခံကိုသာ လူသုံးများတယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ လစဉ်ရာသီလာအပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့က စထိုးထားရင် ချက်ချင်း ကာကွယ်တယ်။ နို့ထွက်မနည်းစေဘူး။ ရာသီမဆင်းခင် ခံစားရတာတွေ သက်သာတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေရင်၊ ဆေးဖြတ်ပြီးနောက် ၁ နှစ်အကြာ ကလေးလိုချင်ရင်၊ သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ရှိရင်၊ ဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ရင်သား-ကင်ဆာရှိရင်၊ ဆီးချိုရောဂါရှိရင်၊ (မိုင်ဂရင်း) ရောဂါရှိရင် မသုံးသင့်ဘူး။ တစ်လခံထိုးဆေး ဆိုတာက ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ ၂၁-၂၈ ရက်သောက်တာနဲ့ သဘောချင်း အတူတူ ဖြစ်တယ်။
ယောက်ျားသုံး (ကွန်ဒုံး) ကျား – သုက်ပိုးတွေကို မ – မျိုးဥနဲ့ မတွေ့စေအောင် ကြားခံပေးထားတဲ့ အဆီးအတားမျိုးဖြစ်တယ်။ Latex (Rubber) or Polyurethane (Plastic) ပစ္စည်း တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်ထားတယ်။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သုံးတတ်ရင် ၉၅-၉၈% စိတ်ချရတယ်။ HIV – AIDS အပါအဝင် လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကိုပါ ကာကွယ်တယ်။
အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒုံး) အမျိုးသမီးရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း (ဗဂျိုင်းနား) ထဲမှာ သက်သောင့်သက်သာ အဝကိုအပြင်၊ အပိတ်ကိုအတွင်းမှာ အနေအထားနဲ့ထည့်သွင်းရမယ်။ ဆက်ဆံမှုပြီးဆုံးရင် အပြင်အဝကို စုစည်းပိတ်ပြီး၊ အထဲရှိနေတဲ့ ကျားသုတ်တွေ ဖိတ်မကျအောင် ပြန်ထုတ်ပြီးစွန့်ပြစ်ရမယ်။ သုံးနေတုန်းမှာ အသံထွက်လို့ တချို့ကမကြိုက်ဘူး။ ရောဂါတွေကာကွယ်နိုင်ပြီး ယောက်ျားက (ကွန်ဒုံး) မသုံးတဲ့အခါမျိုးအတွက် ကောင်းတယ်။ ဈေးချိုတဲ့ အမျိုးသမီးသုံး (ကွန်ဒုံး) ကိုလည်း FDA က အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ။
5. Intrauterine Contraceptive
Device (IUCD or IUD) သားအိမ်ထဲထည့် ပစ္စည်း သားအိမ်ထဲမှာ Plastic (ပလတ်စတစ်) ဒါမှမဟုတ် Copper (ကောပါး) ကြေးနီနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းငယ်လေးတစ်ခု ထည့်ထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ ကျားသုတ်ပိုးဟာ မ-မျိုးဥနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း မဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ တာရှည် (၃ – ၅ – ၁ဝ နှစ်)ကာကွယ်နည်းလည်း
ဖြစ်တယ်။ ကြေးနီဓာတ်ပါတဲ့ (IUD) အသစ်တွေက ပိုပြီး ထိရောက်တယ်။ တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေက ထည့်ပေးရတယ်။ သားအိမ်ထဲကို ပစ္စည်းထည့်လိုက်ပြီး အောက်ခြေ ကြိုးစလေးနှစ်ခုကို တိုအောင်ဖြတ်ပေးမယ်။ (IUD) ရှိနေဆဲဖြစ်တာကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်သည်။ ထည့်ပြီးတာနဲ့ အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ ဟော်မုန်းမပါလို့ ဟော်မုန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မရှိပါ။ ၃ နှစ်ခံ၊ ၅ နှစ်ခံ၊ ၁ဝ နှစ်ခံ၊ ရှိတယ်။ ရာသီများတတ်တယ်။စစ်ဆေးနေသင့်သည်။ ထွက်ကျတာ၊ နေရာပြောင်းတာလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဖြစ်တတ်တယ်။
(NFP) သဘာဝနည်းတွေ(က) Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း၊ Standard Days method
ရက်ရှောင်နည်း (ခ) Withdrawal method (Pullout method) သုက်ရည် ပြင်ပစွန့်ထုတ်နည်း (ဂ)
Breastfeeding ကလေး နို့တိုက်ခြင်းနည်း
အရေးပေါ် တားဆေးလိင်ဆက်ဆံပြီး မြန်မြန်သုံးလေ စိတ်ချရလေဖြစ်တယ်။ ဆက်ဆံအပြီး ၃ – ၅
ရက်အတွင်း သုံးနိုင်တယ်။ ၂၄ နာရီအတွင်း သောက်ရင် ၉၅% ၊ ၂၄ – ၄၈ နာရီအတွင်း သောက်ရင် ၈၅%၊
၄၈ – ၇၂ နာရီအတွင်းသောက်ရင် ၅၈% စိတ်ချရတယ်။ ၅ ရက်အထိ သုံးနိုင်ပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ ရာနှုန်း မသိရသေးဘူး။ Progestin (Levo-norgestrel) 1.5 mg တစ်လုံး တစ်ကြိမ်တည်း၊ ဒါမှမဟုတ် 750 ug
ယခင်ဆောင်းပါးချောင်းဆုံမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့ အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် မြေနေရာ ခက်ခဲနေ
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးဂျပန်တွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှု စံချိန်တင် မြင့်တက်